मौषम : हेर्नुहोस कहाँ र कहिले वर्षा हुदैछ? - इ-दैनिकी
मौषम : हेर्नुहोस कहाँ र कहिले वर्षा हुदैछ?
पुस २८, २०७८ १६;०६ मा प्रकाशित
पछिल्लो केही दिनयता पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा बदली रही हल्का वर्षा र हिमपातसमेत भएको छ । यस प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् मञ्जु बासीले बताए। “आगामी शुक्रबारदेखि अझै अर्कौ मौसमी प्रणालीसमेत विकसित हुने सम्भावना देखिएको छ”, उनले भने ।